Mustafe: Matxafka ayaan ka waayay joornaal soomaali ku qoran - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wargeeyskii ugu horeeyay ee Skåne. Sawirle: SR/Radio Sweden
Mustafe Mohamed Harun. Foto: eget
Mustafe Maxamed Haaruun. Soo saaraha wargeeyska SomSkåneNews. Sawirle: eget
Mustafe: Matxafka ayaan ka waayay joornaal soomaali ku qoran
Akhbaar fiican kama helin soomaalidii hore
La daabacay fredag 21 november 2014 kl 14.40
Booqasho aannu ku tagney madxaf ka mid ah madxafta buugagta aniga oo dhiganaya iskuulka barashada luuqadda iswiidhishka ayaa iigu wacneeyd inaan ku fekero soo saarka war-geeys loogu wal-qalay "SomSkåneNews" oo ka soo baxa magaalada Malmö ee gobolka Skåne. Waa war-geeyskii ugu horeeyey ee carrigaa ka soo baxa kuna qoran luuqadda soomaaliga, sida uu noo sheegay Mustafe Maxamed Haaruun:
Si haddaba aaney su'aasha cid kale oo soomaali ku hadasha aaney mar kale isu weydiin su'aashaa mid la mid ah ayuu Mustafe Maxamed Haaruun ku tallaabsaday howl bilaabatay bishii abriil ee sannadkan 2014.
Qaxootiga soomaalida ee magan-gelyada dalkan ku timaadda ayaa ku kala duwan waayo-arag-nimada shaqo iyo xirfadeed intii aaney dalkan iman. Middaasina oo la oran karo iney saameeyn ku yeelato dabadeed kolka ey dalka yimaadaan iyo hiigsigooda sidii ey ku gaari lahaayeen. Mustafa Maxamed Haaruun ayaa intii aanu dalkan iman ku howl-geli jiray xirfado kala duwan, waana midda la oran karo inay ugu wacan tahay in isaga oo dalka ku sugnaa muddo saddex sannadood gaarsii-san uu ku tallaabsado inuu markii ugu horreeysay ka soo saaro carriga Skåne war-geeys ku daabacan afka soomaaliga bishiiba mar.
Qofka soo-galootiga ahi kolka uu soo galo dal aannu ku dhaqan iyo luuqad aheyn ayuu xogta bulshada uu soo galey ka doontaa bulshadii kaga soo horeeysay ee la qoowmiyadda ahayd. Hase yeeshee aanu Mustafa Maxamed Haaruun middaa ka helin soomaalidii uu carrigaa ugu yimid, balse uu isagu iminka ku dadaalayaa inuu macluumaad iyagii ku siiyo.
Wargeeysdka billaha ee SomSkånenews ee ka soo baxa carriga Skåne ayaa lagu bilaabay cadad gaarsiisan 300 bishii abriil, halka mawqaalkiisii ugu dambeeyayna uu ku soo baxay cadad gaarsii-san 900. Iyadoona laga helo goobaha madxafyada iyo goobaha ey soomaalidu ku kulanto ee xarumaha ururrada soomaalida iyo masaajidda.
Soomaalida maxaad kula talin lahayd?
- Intaad ka soo kacdaan meelaha aad fadhisaan, wax ka qabsada waddanka aad joogtaan. Si aad u badbaadisaan dadkii idinka dambeeyey ee aad ka soo tagteen, sida uu sheegay Mustafe Maxamed Haaruun oo markii ugu horeeysay ku guuleeystay inuu war-geeys ku qoran afka soomaaliga ka soo saaro gobolka Skåne.